Lacagta Canshuurta Uga Soo Noqota Dadka Dakhliga Yar | LawHelp Minnesota
Tax Refunds for People with Low Incomes (PDF)450.56 KB
Ogaanta xaquuqdaada canshuurta machaneedu wuxuu noqon karaa lacag – marmarka qaarkood lacag aan u badan – oo caawisa qoyskaaga. Waa wax aad u huri kartid waqtigaaga si aad u eegto. Waxa dhici karta in canhuurtaada xareynteeda bilaash laguugu sameeyo. Si aad u hesho rug caawimaad fidisa oo kuu dhow, ka wac hay’ada United Way, lambarkeeda gobolka oo dhan ah ee, 2-1-1. Ama gal shabakadeeda (website) https://www.211unitedway.org/. Waxaad sidoo kale aad ka heli kartaa caawimaad bilaash ah shabakada ah www.irs.gov/vita.
Dadka shaqeeya ee kastabada lacag ka sareeysa cadad cayiman waa khasab inay xareystaan labadaba canshuur-celinta dowladda dhexe ee tan gobolka. Xataa hadii aad kasbato cadad ka hooseeya cadadyadaa cayiman waa aad xareysan kartaa canshuurta si lacagi kuugu soo noqoto. Foomamka canshuurta waa in la xareeyaa ugu dambayn bisha Abriil 15keeda. Sannadkan waxa aad canshuurta xareysan adigoo isticmaalaya dakhligii ku soo galay sannadkii hore. Kolkaa, sannadka 2021, waxa aad xareysanaysaa canshuur-celintii sannadka 2020 ka. Hadii lacag lagugu yeesho waa khasab kolkaa inaad ka bixiso ganaax iyo dulsaar wixii lacag ah ee aadan bixin ka hor bisha Abriil 15 keeda.
Lacagta ka soo Noqota Canshuurta-celinta Dowlada dhexe
Lacagta Canshuurta uga soo noqota Dakhliga la kasbado (EITC)
EITC waa lacag canshuureed oo u soo noqota dadka shaqeeya. Inta ugu badan ee lacagtaa ah ee qofka u soo noqon kartaa waa $6,660. Qofka kaligii ah iyo dadka isqabaa labaduba waa ay heli karaan. Khasab ma aha inaad ilmo haysato, laakiin, lacagta soo noqonaysaa waa ka badan tahay tan kale hadii aad ilmo haysato. Waxaa jira xeerarka ku saabsan ilmaha kuwa aan sheegan kartid kolka aad canshuurta xareysanayso. Ka eeg hoos. Hadii aad xeerarkaa iska dhaga-tirto, waxaa laguu diidi karaa lacagta canshuurta uga soo noqota dakhliga (EITC) ilaa iyo 10 sanno.
Waa khasab inaad shaqeysay sannadka 2020. Ma aad heli kartid lacagta (EITC) hadii aad lacag ka kasbatay dibada Mareykanka (U.S.). Kasbashooyinkaaga iyo “Dakliga Guud” ee ku qoran foomka canshuurtaadu waa khasab inay ka yaraadaan:
$50,954 hadii aad leedahay 3 ilmood ama ka badan oo ah ilmaha xaqa u leh (ama $56,884 hadii aad tihiin labo qof oo is isqaba oo wada xareysanaya)
$47,440 hadii aad leedahay 2 ilmood ama ka badan oo ah ilmaha xaqa u leh (ama $53,330 hadii aad tihiin labo qof oo is isqaba oo wada xareysanaya)
$41,756 hadii aad leedahay hal ilmood oo xaq u leh in lagu xareysto canshuurta (ama $47,646 hadii aad tihiin labo qof oo is isqaba oo wada xareysanaya)
$15,820 hadii aadan lahayn wax ilmo ah oo xaq u leh in lagu xareysto canshuurta (ama $21,710 hadii aad tihiin labo qof oo is isqaba oo wada xareysanaya)
Ma ka soo baxayaa shuruudaha lacagta canshuurta ka soo noqota ee (EITC)?
Waa inaad tahay Muwaadin Mareykan (U.S.) ama degane qalaad sanadka 2020 oo dhan.
Waxa aad u baahan tihiin inaad haysataan lambar sooshal sakuurati oo shaqeynaya adiga, xilahaaga, iyo ilmahaaga aad canshuurta ku xareysanayso.
Martabadaada canshuur xareysigu ma noqon karto “isqabid laakiin gaar u kala xareysi.”
Dakhliga kaa soo gala maalgelintu waa khasab inuu ka yaraado 3,650.
Ma sheegan kartid Lacagta Canshuurta ka soo noqota ee (EITC) hadii qof kale uu adiga kugu xareysto canshuurta adigoo ah “ilmo xaq u leh” in canshuurta lagu xareysan karo.
Ma ku xareysan karaa ilmo si aan u sheegto lacagta canshuurta ee (EITC)?
Waa aad ku xareysan kartaa ilmo si aad u sheegato lacagta canshuurta (EITC) hadii:
Ay yihiin ilmo adiga aad dhashay ama aad u qaadatay inaad korsato, ilmo aad awoowe ama aad ayeeyo u tahay, ilmo xilahaagu uu dhalay, walaal, walaalay. Sidoo kale waa aad sheegan kartaa ilmaha uu dhalay mid walba oo ehelkaagaa kor ku xusani. Waa khasab in adiga kaligaa aad ilmahaa u koriso sidii ilmo aad adigu dhashay oo kale. Waa sheegan ilmaha xaqa u yeesha in canshuurta lagu xaraysto ee ah ilmaha ay dowladu kuu keentay.
Ilmahu waa inuu adiga kugula noolaa wadanka Mareykanka (U.S.) in ka badan bar sannadka 2020 ka.
Ilmahu waa inuu adiga kaa yar yahay uuna:
Ka yar yahay 19-sanno jir Deseember 31, 2020
Yahay arday iskuul buuxa dhigta oo ka yar 24-sano jir Deseember 31, 2020
Ilmahu si rasmi ah oo buuxda uu naafo u yahay mar ay noqotabada mar ka mid ah sannadka 2020, da’du may quseeyso arrintan.
Hadii ilmaha ay labada waalidba xaq u leeyihiin inay in canshuurta ku xareysan karaan, laakiin labada waalid midna uusan sheegan ilmaha, kolkaa, CID KALE ma ay sheegan karto ilmaha aan ka ahayn kolka Dalkhliga Guud (AGI) ee qofka sheeganayaa ilmahu uusan ka badnayn wadarta Dakhliga Guud (AGI) ee labada waalid ee ilmaha dhalay. Xaaladan oo kale waxa ay dhacdaa kolka dad ehel ah oo badani ay meel ku wada nool yihiin.
Hadii ilmahu ay canshuurta ku xareyan karaan in ka badan hal qofi, ayna labo qof ku wada xareystaan canshuurta ilmaha, kolkaa, waalidka ilmaha waqtiga ugu badan la noolaa sannadkaa waa inuu sheegtaa ilmaha. Hadii ilmahu uu la noolaa waqti is le’eg labada waalidba, kolkaa labada waalid kan dakhliga badani waa inuu sheegtaa ilmaha.Hadii ilmahu:
uusan labada waalid midna la noolayn
uu yahay ilmo xaq u leh in canshuurta ay ku xareysan karaan dad ka badan hal qofi, iyo in,
dadkaasi aysan isku raaci karin cidda sheeganaysa ilmaha, kolkaa qofka leh dakhiga ugu badan waa inuu sheegtaa ilmaha
Ka eeg warqadayada xogta aruursan ee ilmo ma ku xareysan karaa Canshuurtayda? Can I Claim a Child on My Tax Return? wixii akhbaar kale ah.
Waxa aan u hayaa ilmo dowlada. Ma ku xareysan karaa canshuurta ilmahaa? Waa aad sheegan kartaa oo ku xareysan kartaa canshuurta ilmaha aad hayso hadii ay xaq u leeyihiin in canshuurta lagu xareysan karo. Ilmaha dowlada loo hayo ee xaqa u leh in canshuurta lagu xareystaa waa ilmo ay kuu keentay adiga hay’ad loo ogol yahay meelaynta ilmaha, kugulana noolaa wadanka Mareykanka (U.S.) adiga ugu yaraan 6-bilood iyo 1 maalin mudada sannadka. Ilmahaasi waa inuu sidoo kale ka soo baxaa xeerarka da’da ee kor ku xusan.
Ma sheegan lacagta Canshuurta uga soo noqota Dakhliga la kasbado (EITC) hadii aanan ilmo lahayn?
Haa, hadii adigu:
aad ugu yaraan 25-sanno jirto aadna ka yar tahay 65-sanno jir
uusan qof kale mas’uul kaa ahayn
aadan ahayn ilmo qof kale uu xaq u leeyahay inuu canshuurta ku xaraysto,
aad ku noolayd wadanka United States in badan bar waqtiga sannadka 2020
Sidee ku helaa lacagta Canshuurta uga soo noqota Dakhliga la kasbado EITC?
Xareyso foomka 1040 (Form10 40) ee canshuur-celinta dowlada dhexe
Hadii aad haysato ilmo xaq u leh in lagu buuxsan karo canshuurta, xareyso foomka 1040 Foomka 1040 (Form 1040) IYO Jaangooyada (EIC), Foomka 1040 (Form 1040)
Hay’ada IRS tu iyada ayaa kuu xisaabisa lacagta canshuurta EITC ee aad helayso. Hadii aad xaq u yeelato lacagta, waxa aad waydiisan kartaa hay’ada IRS tu inay iyadu kuu sameyso xisaabta cadadka aad helayso. Hadii aad haysato ilmo xaq u leh inaad canshuurta ku xaraysan karto, waa khasab inaad buuxiso barka koowaad ee Foomka lacagta canshuurta ka soo noqota ee (EIC).
Lacagta canhuurta EITC ma saameysaa manfacyadayda MFIP ka, SSI, gargaarka cuntada ama manfacyo kaleba?
Badanaa, lacagta canshuurta ka soo noqota ee EITC looma xisaabiyo dakhli ahaan, bisha aad hesho jeega ama bisha xigta. 2 bilood ka dib, wixii lacagtaa ah ee wali aan la isticmaalin waxaa dhici karta in lagu xisaabiyo heerka hantidaadu aysan dhaafi karin kolka la eegayo xaq u yeeladka cayrta. Hadii iminka aad qaadato cayr, kala hadal hawl-wadeenkaaga saameynta lacagta kuu soo noqotay ay ku yeelanayso cayrtaada.
Horey u sii Xaqiijinta Xaq u yeeladka Lacagta EITC
Hadii hadda ka hor laguu diiday lacagta (EITC), waxaa dhici karta inaad u baahato inaad buuxiso foomam si aad u cadeyso inaad xaq u leedahay lacagta (EITC) iminka. Hadii ay hay’ada IRS tu kuu soo dirto warqad kuu sheegaysa inay khasab kugu tahay inaad arrintan sameeyso, la soo xiriir Xafiiska Gargaarka Sharciyada (Legal Aid).
Lacagta Canshuurta Ilmaha ah ee ay soo celiso Dowlada Dhexe
Waa lacaga canshuurta la isaga soo celiyo oo siisa ilaa $2,000 ilmo walba oo ka yar 17-sanno jir oo aad canshuurta ku xaraysato. Buuxi xaashida Lacagta Ilmaha ee Canshuurta la isaga soo celiyo ee buuga yar ee tilmaamaha ku taal iyo Jaan-gooyada 8812 (Schedule 8812) ee Foomka 1040 (Form 1040). Waa aad haysan karaa (ITIN) halkii aad ka haysan lahayd Lambarka Sooshal Sakuuratiga (Social Security). Waa sheegan kartaa lacagtan iyo mida canshuurta (EITC) da. Hadii aad iska indho-tirto xeerarka Lacagta Ilmaha Canshuurta la isaga soo celiyo, waxaa lagu diidi karaa Lacagta Ilmaha Canshuurta la isaga soo celiyo muddo ilaa iyo 10-sanno gaari karta. Hadii aadan xaq u lahayn Lacagta Ilmaha Canshuurta la isaga soo celiyo, waxaa dhici karta inaad xaq u yeelato lacagta dowlada dhexe ku bixiso dadka kale ee aad mas’uulka ka tahay taa oo ah $500 qof walba oo aad mas’uul ka tahay.
Lacagta Dowlada Dhexe Ilmaha ku Bixiso iyo Lacagta lagu bixiyo Daryeelka Dadka Mas’uulka laga yahay
Hadii aad gasho kharashaad haynta ilmaha ah kolka aad shaqaynayso ama aad shaqo raadinayso, waxa aad heli kartaa lacag canshuurta kaaga soo noqota. Waxa aad sheegan kartaa kharashyada aad ku bixiso haynta ilmaha aad mas’uulka ka tahay ee ka yar 13-sanno jirka ama qof aad mas’uul ka tahay oo naafa ah da’ kastaba ha jiree. Si aad lacagtan u hesho, waa khasab in aad hesho aqoonsiga (ID) canshuur-bixiyaha ee qofka ama barnaamijka bixinaya adeegyada haynta ah. Xareyso Foomka 2441 (Form 2441).
Lacagta Tacliinta la Isu soo Celiyo ee Dowlada Dhexe
Hadii aad ku bixisay lacago iyo khidmado kale tacliin jaamacadeed ama kuleej oo adiga, xilihaaga ama qof aad mas’uul ka tahay uu qaatay, waxa aad heli kartaa ilaa iyo $2,500 oo ah lacagta tacliinta la isugu soo celiyo. Xareyso Foomka 8863 (Form 8863).
Lacagaha La Isu soo Celiyo Ama La Iska Jaro ee Minnesota
Lacagta Loo soo Celiyo Qoysaska Danyarta ee Shaqeeya ee Minnesota
Hadii aad ka soo baxdo shuruudaha xeerarka Lacagta Canhuurta uga soo Noqota Dakhliga la Kasbato (EITC) dakhligaagana la kasbaday iyadoo Minnesota la joogo, kolkaa waxa aad heli kartaa Lacagta Loo soo Celiyo Qoysaska Danyarta ah ee Shaqeeya ee Minnesota. Si aad u sheegato lacagtan, buuxi foomamka canshuurta ee dowlada dhexe iyo foomamka Minnesota ee M1 (foomka caadiga ah) and Jaan-gooyada M1WFC.
Lacagta Ilmaha iyo Daryeelida Dadka Mas’uulka laga yahay ku soo noqota ee Minnesota
Waxa aad heli kartaa lacagta canshuurta ee gobolku u soo celiyo kharashaadka kuu gala daryeelida ilmaha ama dadka naafada ah ee mas’uulka laga yahay awgood inta aad shaqeynayso ama shaqo raadiska aad tahay. Dadkaa aad mas’uulka tahay waxa ay noqon karaan ilmo ka yar 13-sanno jir ama qof aad mas’uul ka tahay oo naafa ah da’ kastaba ha jiree. Si aad u sheegato lacagtan, buuxi foomamka canshuurta ee dowlada dhexe iyo foomamka Minnesota ee M1 (foomka caadiga ah) and Jaan-gooyada M1CD.
Lacagta Tacliinta La Isaga Soo Celiyo iyo Ka Jaritaanada ee Minnesota
Waxa aad heli kartaa lacago ay canshuurta gobolku kaaga soo celiso ama ka jaritaano ah kharashaadka waxbarashada ilmahaaga ama waxyaabaha la xiriira. Kuwaasi waxa ay bixiyaan kharashaadka tacliinta ilmaha ee laga bilaabo uulada ilaa iyo dugsiga sare. Cadadka ugu badan ee lacagta ee la sheegan karaa waa ilaa $1,000 ilmahiiba. Waxaa aad u isticmaali kartaa lacagtaa waxyaabaha sida casharada gaar u wax ugu dhigida ah, buugaaga iskuulka iyo alaabada kale, khidmadaha lagu bixiyo waxyaabaha kale sida gaadiidka, casharada muusikada, barnaamijyada iskuulka ka dib la galo iyo xeryaha xilliga xagaaga waxbarashada loo aado. Waxaad kaloo u isticmaali kartaa lacagtaa kharashaadka aaladaha kumbuyuutarada ee waxbarashada (software) loo isticmaalo (ugu badnaan $200). Khidmadaha iskuulada gaarka loo leeyahay waxa ay noqon karaan ka jarid ee ma aha lacag soo noqonaysa. Si aad u sheegato lacagtan, buuxi foomamka canshuurta ee dowlada dhexe iyo foomamka Minnesota ee M1 (foomka caadiga ah) iyo Jaan-gooyada M1ED. Si aad u hesho ka jaridan, buuxi bogga gadaale ee Foomka M1 (Form M1).
Canshuurta Guryaha ee Minnesota ama Lacagta Guriga uga soo noqota Kireystaha
Lacagtan soo noqonaysaa waxa ay ku salaysan tahay dakhligaaga iyo cadadka canshuurta guryaha ah ee aad bixiso adigoo mulkiile guri ah ama kireyste ah.
Kiraystayaashu waxa ay ka helaan Warqada Kirada la Bixiyey (CRP) qolada ay guriga uga jiraan. Hadii qolada gurigu aysan ku siin warqadaa, eeg warqadayda xogta xafidan ee Lacagta Guriga uga soo noqota Kireystaha Renter’s Refund.
Lacagta u soo noqota mulkiilayaasha guryahu waxa ay ku salaysan tahay oraahda canshuurta la bixin doono sannadka soo socda. Guriga ama abaartamiintadu waa khasab in ay noqoto deegaanka weyn lagu nool yahay. Si aad u sheegato lacagtan, buuxi foomamka canshuurta foomka M1PR. Foomkan waxaa in la xareeyaa ugu dambayn Ogoosto 15. Lacagtan waxa aad haystaa hal sanno oo aad ku codsan karto.
Lacagta Canshuurta ee Dakhliga la Kasbado (EITC) iyo lacagaha kale ee canshuurta la isaga soo celiyaa waxaa la sheegan karaa ilaa 3-sanno ka dib kolkii la rabay in la xareysto. Hadii aadan canshuur xareysan qaar ama dhamaan 3-sanno ee la soo dhaafay, hadda waa aad xareysan kartaa waana aad sheegan kartaa lacagta canshuurta ee (EITC) da iyo lacago kale oo kuu soo noqon kara. Foomamka iyo cadadka lacagta ah ee la ogol yahay waa ay isbedbedelaan sannad walba. Hubi inaad isticmaasho foomka loogu talagalay sannadka aad xareysanayso! Foomamka si aad u hesho ka wac hay’ada (IRS) telefanka hoose ama waxa aad ka heli kartaa shabakadooda (website) ah, www.irs.gov. hadii aad canshuur xaraysatay laakiin aadan wada sheegan lacago hadda aad is leedahay inaad sheegatay ahayd, waxa aad xareysan kartaa cusboonaysiinta Foomka 1040X (Form 1040X) (dowlada dhexe) ama kan M1X (Minnesota) mid walba oo ka mid ah 3-dii-sanno ee la soo dhaafay.
Su’aalaha canshuurta dowlada dhexe, ka wac (800) TAX-1040
Canshuur bilaash loogu xareeyo ayey heli karaan dadka danyarta ah, ama naafada ah, ama waayeelka ahi. Si aad u hesho rug caawimaad fidisa oo deegaankaaga ah, wac khadka ah (651) 297-3724 ama ka wac hay’ada United Way, lambarkeeda gobolka oo dhan ah ee 2-1-1. Waxaad kalood ka heli kartaa akhbaarta caawimaadaha bilaash ah ee deegaankaaga shabakada www.irs.gov/vita.
Xogta aruursan ee warqadani waxa ay quseeysaa uun canshuurta sannadka 2020. Canshuur-celinta waa in la xareystaa ugu dambayn bisha Abriil 15th, 2021